EA013 - Rafitra fanairana antso fanairana momba ny fikorontanana OMG Wireless Wireless -500 + ft Range an'ny fiasa [2 amin'ny 1] - $ 250 | Vahaolana OMG
Safidy azo alaina dia ahitana 1. Sound + Light 2. Miantefa fotsiny 3. Ny fahazavana irery ihany
Bright LED alert alert dia tonga lafatra ho an'ireo mihaino.
Firafitry ny sehatr'asa 500 + ft any amin'ny faritra misokatra.
32 feo / feo fanairana mba hisafidy (Fampandrenesana melodika 23 sy fampandrenesana an-tserasera 9), 3 amnestie contrôlée volume, ary mampiasa kodia 16-bit mba hanafoanana ny fifindran'ny fitaovana hafa.
Tsotra raha mampiasa rafitra fanairana / fanairana bokotra antso ho an'ny marary sy mpikarakara - Fanairana maika ho an'ny zokiolona na ny kilemaina hiantso vonjy.
Tsindrio fotsiny ny bokotra fiantsoana rehetra hanairana ny mpikarakara amin'ny alàlan'ny mpandray tsy misy tariby - Ny elanelan'ny rafitra hatramin'ny 500 metatra amin'ny faritra malalaka.
Ny bokotra antsoina dia azo atao toy ny mpihira, mitondra any am-paosiny, na eo am-pandriana.
Ny bokotra antsoina dia manohitra ny rano.
Ny mpandray fandefasan-tsakafo kely dia azo alaina miakatra, napetraka eo akaikin'ny mpikarakara, na entina ao am-paosiny.
Fitaovana fitaovana ho an'ny ankizy: Ny reny izay te hampihatra ny fahaleovantenan'ny zanany hatramin'ny fahatanorany dia tsy misalasala satria mila manindry bokotra ho fanampiana izy ireo. Mandeha fitaovana: Tena fitaovana tena ilaina ilaina ho an'ny fianakaviana miaraka amin'ny ray aman-dreny sy ankizy mipetraka ao amin'ny efitrano samihafa. Amin'ny ririnina, ny ray aman-dreny dia afaka manindry ny bokotra raha tsy miakanjo sy mitraka.
Ahitana ny zavatra ilaina rehetra hampiasaina eo noho eo - Rantsana antso iray, mpandray iray. Ny mpandefa sy ny mpanome amin'ny baoritra ambany baoritra. Receiver powered by 3 x AAA batteries (not included); mpanita-pahefana powered by 1 x CR2032 batterie (ao anatin'izany).
Fametrahana fitaovana ho an'ny marary sy ny kilemaina: Satria tsy afaka mijanona amin'ny marary na ny kilemaina foana ny mpitsabo mpanampy, inona no tokony hatao rehefa mila fanampiana izy ireo indrindra mandritra ny alina? Afaka mahazo fikarakarana ara-potoana sy amim-pitandremana izy ireo raha tsy mitozo amin'ny fanindriana fotsiny ny bokotra.
Fitaovana fitaovana ho an'ny ankizy: Ireo reny izay te hampihatra ny fahaleovantenan'ny zanany hatramin'ny fahatanorany dia tsy misalasala satria mila manindry bokotra fotsiny izy ireo.
Mifoha fitaovana: Izy io dia fitaovana fiantsoana tena mahasoa ho an'ny fianakaviana miaraka amin'ny ray aman-dreny sy ankizy mipetraka ao amin'ny efitra samihafa. Amin'ny ririnina, ny ray aman-dreny dia afaka manindry ny bokotra raha tsy miakanjo sy mitraka.
Fitaovana entina miaro ny vehivavy bevohoka na vehivavy mandritra ny volana voatazona aorian'ny fiterahana zaza: Ireo vehivavy bevohoka na vehivavy mandritra ny volana maromaro no mila ny fikarakarana amim-pitandremana azy. Inona no hataontsika rehefa anahy. Fianakaviana voafonja na fianakaviana tsy afaka mijanona miaraka amin'izy ireo amin'ny fotoana rehetra? Amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra dia afaka mamaly ny fangatahany.
Melody manao feo ho an'ny fifantenana: 23 melodies sy fampandrenesana vonjy taitra 9.
Fomba fiasa miasa: fanairana fotsiny; fahazavana fotsiny; fahazavana sy fanairana
Indraindray mandeha bakteria: Misy fampahatsiahivana raha ambany ny baoritra.
3 ambaratonga ambaran'ny feo: Azonao atao ny manitsy izany amin'ny filanao.
Mora ampiasaina: Tsotra raha mampiasa rafitra fanairana / fanairana bokotra antso ho an'ny marary sy mpikarakara - Fanairana maika maika ho an'ny be antitra na sembana hiantso vonjy - Tsindrio fotsiny ny bokotra antso na fanairana hampitandremana ny mpikarakara amin'ny alàlan'ny mpandray tsy misy tariby - Ny elanelan'ny rafitra hatramin'ny 500 metatra misokatra faritra.
Fomba entina manelingelina ny fifindrana: Ampiasao ny fametahana 16-bit, mba tsy hivezivezy amin'ny mpifanolo-bodirindrina.
Samy manana fampahatsiahivana kely avokoa ny mpanome sy ny mpandidy rehetra: Mba hialana amin'ny herinaratra ary tsy afaka mahazo fanampiana ara-potoana ny vahoaka.
Ny endrika miavaka: Famolavolana tantera-drano sy ny famolavolana fanoherana ny fahalavoana, hisorohana ny olona tsy afaka mahazo fanampiana rehefa lavo izy na loza hafa.
Tsindrio ny bokotra "Signal" mpandray mandra-pisian'ny jiro LED
Tsindrio ny bokotra mivezivezy miverina indray mandeha miaraka amin'ny receiver (azafady ny manala ny tabilao mpiaro fikolokoloana plastika amin'ny fanokafana ny bokotra miaraka amin'ny fampiasana ny mpanodina)
Ny jiro mena dia manjelatra hanamarina ny fampakaram-bady mahomby
Ny mpandeha dia manala ny fomba fitondran'ny mpivady
Ny rafitra dia efa vonona hampiasaina. Avereno atao ny dingana raha tsy misy fifandraisana intsony ny bokotra sy ny mpandray
14797 Total Views 12 Views Today